भारतबाट बिजुली किन्नेः फेरी भारतलाई नै बिजुली बेच्न प्राधिकरणले टेन्डर हाल्ने ? | Artha News Nepal
Home	ऊर्जा	भारतबाट बिजुली किन्नेः फेरी भारतलाई नै बिजुली बेच्न प्राधिकरणले टेन्डर हाल्ने ?
भारतबाट बिजुली किन्नेः फेरी भारतलाई नै बिजुली बेच्न प्राधिकरणले टेन्डर हाल्ने ?
काठमाडौं – विद्युत् आपूर्ति गराउने सम्बन्धमा भारतको बीआरपीएल नामक कम्पनीले भारतकै एनभीभीएनमार्फत आह्वान गरेको टेन्डरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि सहभागी भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले गत सोमवार उक्त टेन्डरमा सहभागी हुन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले उक्त टेन्डरमा प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
त्यसमा प्राधिकरणले २५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्नेगरी सहभागी भएको हो । प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजप्mफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारतमा निर्यात गर्नेछ ।
भारतीय कम्पनीले नेपालको उक्त प्रस्ताव स्वीकृति गरेमा प्राधिकरणले जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म (४ महीना) नेपालको विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ । तर, नेपालमा खपत नभएर बढी भएको विद्युत् मात्र निर्यात गर्न पाउने गरी आयोगले स्वीकृति दिएको छ । त्यसअनुसार नेपालमा खपत हुन नसकेको विद्युत् मात्र प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विक्री गर्न पाउनेछ ।
प्राधिकरणले नेपालको विद्युत् मागमा असर नपर्ने गरी, जगेडा (सरप्लस) को ग्यारेन्टी गरेर भारतमा विद्युत् विक्री गर्न सक्छ । साथै, प्राधिकरणले नेपालमा बिजुली आवश्यक परेका बेला १० मिनेटभित्र आपूर्ति हुन सक्ने (स्पिनिङ रिजर्भ ) गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले आफैले विदेशी बजारमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यसमा सरकार र नियमन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नै आयोगले उक्त टेन्डरमा सहभागी हुन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
टेन्डरनेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिजुलीभारत
र्रुद्रमति (धोबीखोला) मा बगाइयो मेलम्चीको पानी
ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत, मंगलवारबाट कारोबारमा आउने
युनाइटेड इदी मार्दी एण्ड आरबि हाइड्रोपावरको साधारण सभा चैत २० गते
४२ मेवा क्षमताको मिस्ट्री खोला जलविद्युत् आयोजनाले भोलिदेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने
सिभिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुनिलकुमार पोखरेल नियुक्त
मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफामा उछाल
शेयरबजारमा झीनो सुधार, कारोबार रकम भने घट्यो